မလေးရှားမှ အိမ်ဝယ်ကြမယ်ဆိုယင် “How to buy house in Malaysia” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကွန်မြူနစ်ပါတီ “Maoist” မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဒေသ ဗုဒ္ဓဂါယာ အနီး တိုက်ခိုက်မှု
I’ll begin with an obituary. The Burma pro-democracy movement is dead. »
Ref: www.meshio.com/home-loan-calculater 2009
အိမ်တန်ဖိုး Condo 400,000
15% Down Payment 60,000
85% Bank Loan 340,000
အနှစ်30/ Interest Rate 5.2 per annum
လစဉ် ပေးသွင်းငွေ 1867 x လ360(၃၀နှစ်) = 672,120 (အတိုး + ချေးငွေ)
လင်းယုန် ။ ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို Bank ကချေးငွေပေးတယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
သန့်ဇင်။ ။ဘဏ်က အိမ်ဂရန်ကို သိမ်းထားပြီး အနှစ်၃၀ Compound Interest က၃သိန်း၃သောင်း ကျော်တောင် အတိုးရတာဆိုတော့ အရမ်းချေးချင်တာပေါ့ဗျာ။
လင်းယုန် ။ ။ ဘဏ်တွေဘက်က အဲ့ဒီလောက်အမြတ်ယူတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ချေးဖို့တန် ပါ့မလား?
သန့်ဇင်။ ။ကိုယ်ငှားနေရတဲ့အိမ် ရဲ့အိမ်လခနဲ့ ကိုယ်လစဉ်ဘဏ်ကိုပေးရတဲ့ ငွေသိပ်မကွာရင် တန်ပါ တယ်။ အိမ်ဈေးက တက်နေတာလည်း ရှိသေးတယ်။
လင်းယုန် ။ ။ ဘဏ်ကိုပေးရတဲ့ အတိုး ( Compound Interest )သက်သာအောင် ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ?
သန့်ဇင်။ ။ Down Payment ပိုပေး၊ နှစ်တို ချေးငွေကိုယူ (ဖြစ်နိုင်ရင် ၁၅နှစ်ပေါ့) နှစ်စဉ် Interest Rate သေချာစစ်ပေါ့။
လင်းယုန် ။ ။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် သတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေ ပြောပေးပါဦး။
(၁) Foreigner တစ်ယောက်အတွက် Down Payment ကို အနိမ့်ဆုံး 15% (သို့) 15% အထက် ပေးရပါမယ်။
(၂) 1 Jan 2010 မတိုင်မှီက ၂သိန်းခွဲနှင့် အထက်ဆိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၀ ကစပြီး နိုင်ငံခြားသားများက ၅သိန်းနှင့် အထက်ဘဲ ၀ယ်ခွင့်ရှိတော့မှာပါ။ (မှတ်ချက်။ ။ Google မှာ ”FIC Guidelines 2010” ရှာကြည့်နိုင်တယ်)
(၃) မလေးရှားမှာနေတာ ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲ?
(၄) ဘာပါမစ်နဲ့ နေသလဲ?
(၅) အိမ်ထောင်ရှိ/မရှိ ?
(၆) Age of Borrower အိမ်ဝယ်သူ (ချေးငွေလျောက်သူ)ရဲ့ အသက်
အသက် + ငွေချေးကာလ < ၆၅နှစ် အထိဘဲ စဉ်းစားပါတယ်။
ဥပမာ – ငွေချေးသူ အသက် ၄၀ + နှစ်၂၀ (သို့) နှစ်၂၅ ဆိုရင် ရပါတယ်။
ကိုယ့်အသက်က ၅၀- ချေးငွေယူမယ့်နှစ်က နှစ်၃၀ ယူလို့မရပါဘူး၊
လင်းယုန် ။ ။ လစဉ်ဝင်ငွေနဲ့ လစဉ် payment ဆက်နွယ်မှုလေး ပြောပြပါဦး။
သန့်ဇင်။ ။ ကိုယ့်ရဲ့ လစဉ်ဝင်ငွေ Monthly Income ဟာ ကိုယ်လစဉ်ပေးသွင်းရမယ့် ငွေထက် ၃ဆခန့် ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ (ကိုယ့်ဝင်ငွေရဲ့ 40% (သို့) 33% ကိုသာ အိမ် + ကား ၀ယ်ခွင့်ပေးထား တာပါ)
လင်းယုန် ။ ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ၀ယ်လို့မရတဲ့အိမ် ဆိုပြီးတော့ရော ရှိပါသလား?
သန့်ဇင်။ ။ ရှိပါတယ်။ Low & Medium Cost နဲ့ ဆောက်ထားသော မလေးBumi Putra များအတွက် သတ်မှတ်ထားသောအိမ်များ Malay Reserved Land များ Bumi-Lot ကို ရှောင်သင့်ပါတယ်၊ Non-Bumi Lot & Free Hold ဘိုးဘွားပိုင်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။Lease hold ဆိုရင်လည်း ဘယ်နှစ်နှစ် ကျန်လဲ သေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်။ Under-Construction ဆောက်လုပ်ဆဲ တွေလဲ နိုင်ငံခြားသားတွေအဖို့ ရှောင်တာကောင်းပါတယ်။
လင်းယုန် ။ ။ ဘဏ်ဘက်က နိုင်ငံခြားသားကို ချေးငွေပေးပြီး ဘယ်လိုများ ချုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလဲ?
သန့်ဇင်။ ။ ယေဘုယျအချက် ၃ ချက်လောက် ပြောရမယ်ဆိုရင်
(၁) အိမ်ဂရန်ကို ဘဏ်က သိမ်းထားတယ်။
(၂) Valuation Report
အိမ်တန်ဖိုးက ဥပမာ-၆သိန်းဆိုပေမယ့် ဘဏ်ရာဖြတ်က အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးဖြတ်တာ
ဥပမာ – ၅သိန်း၂သောင်းဆိုရင် အဲ့ဒီ ၅သိန်း၂သောင်းရဲ့ 80% ကိုဘဲ ချေးတာပါ။ တချို့လူတွေ ဒီနေရာမှာ ပြဿနာတက်တတ်ပါတယ်။
Valuation ဘဏ်မှရာဖြတ်က အ်ိမ်တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့ဈေးဟာ အိမ်အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်တဲ့ ဈေးထက် လျော့မှာပါ။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ငွေချေးသူဘက်က ဘဏ်ကို ပိုက်ဆံမသွင်းနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ Bank Lelong လေလံတင်ရင် ဘယ်လိုမဆို ဘဏ်ဘက်က ဘဏ်ချေးငွေ ပြန်ရနိုင်အောင်ပါ။
အ်ိမ်ဈေး 600,000 Valuation (ရာဖြတ်) 520,000
80% ချေးငွေ 480,000 80% ချေးငွေ 416,000
20% Down Payment 120,000 Down Payment (၆သိန်း-416,000) = 184,000
ကိုယ့်ဘက်က မူလတွက်ထားတဲ့ Down Payment 20% 120,000ရယ်, Lawyer Legal fees, stamp duty စသဖြင့် 150,000 စုထားပေးမယ့် Valuation ရာဖြတ်က ဈေးလျော့ဖြတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် နောက်ထပ်အပို 64,000 RM ကုန်ဖို့ရှိ ပါတယ်၊
နောက်တစ်ခုက Location of Property၊ ဒါသိပ်အရေးကြီးတယ်။
ကိုယ်ဝယ်မယ့်နေရာဟာ land slide မြေပြိုနိုင်မယ့် နေရာမျိုးဆိုရင် အိမ်ရာဖြတ်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ပိုနည်းသွားမယ်။ ဘဏ်ကချေးငွေ 80% မပေးနိုင်ဘဲ 60% ဘဲချေးနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အိမ်အတွက် Deposit ကို Valuation Report & Bank Loan offer letter ရပြီးမှ ပေးသင့်ပါတယ်။
(3) MRTA-Mortgage life Assurance အိမ်နှင့် ပတ်သက်သော အသက် Insurance .
– ဘဏ်က ၄ သိန်းချေးတယ်ဆို ပါဆို့
– အဲ့ဒီ ၄သိန်းချေးငွေအတွက် MRTA ၀ယ်ရင် 12,000 RM ခန့်ကုန်ကျမယ်.
– ၄သိန်းချေးထားတဲ့ အနှစ်၂၀ အတွင်း ငွေချေးသူ (အိမ်ဝယ်သူ) သေဆုံးခဲ့ရင် (သို့) ဒုက္ခိတ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘဏ်မှာကျန်သော ငွေအားလုံးကို Insurance ကုမ္ပဏီက ပေးလျော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်မိသားစုဝင်များက အိမ်ဖိုးဆက်ပေးစရာမလိုဘဲ အိမ်ကို ပိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လင်းယုန် ။ ။ အိမ်ရှာဖို့ လမ်းညွန်လေးပြောပါဦး
သန့်ဇင် ။ ။ စင်္ကာပူ ဆိုရင် Real Estate (Property) Myanmar Agent တွေ အများကြီးရှိပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ မလေးရှားမှာ (မြန်မာ) market တော့မရှိသေးပါဘူး၊ ဒီနိုင်ငံသား Agent တွေက တဆင့် ဖြစ်ဖြစ် Internet ကဖြစ်ဖြစ် ရှာနိုင်ပါတယ်။
လင်းယုန် ။ ။ Internet ကရှာမယ်ဆိုရင် website ပြောပေးပါအုံး၊
သန့်ဇင် ။ ။ www.mudah.com.my , www.iproperty.com.my, , www.starproperty.my , www.thinkproperty.com.my
ကျွန်တော်တို့လို နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၅သိန်း အထက်ကိုရွေးပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Area eg. Ampang , Cheras , Puchong ဆိုပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်၊ Link House တို့ Bungalow (Semi-D) Condo, Apartment စသဖြင့်ပေါ့။
လင်းယုန် ။ ။ အခုလို အသေးစိတ်ရှင်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အကြမ်းဖျင်း Procedure လေးနဲ့ အဆုံးသတ်ပေးပါလား။
သန့်ဇင်။ ။ (၁) အိမ်ရှာမယ်၊ တွေ့ပြီဆိုရင် Lawyer အကြောင်းကြားပါ။
(၂) Lawyer မှ Land title Search လုပ်မယ် ၊လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှု တွေလုပ်မယ်၊ ရောင်းသူဟာ တကယ်ပိုင်/ မပိုင် ၊ ကန့်ကွက်မည့်သူ ရှိ/မရှိ၊ ရောင်းသူဟာ ဒီအိမ်ကိုရော ဘဏ်ချေးငွေ နဲ့ဝယ်ထားလား
အကြွေးကျန်သေးရင် အဲ့ဒီဘဏ်ဘက်ကရော ရောင်းဖို့သတောတူလား။
(၃) Down Payment 20% နှင့် 5% အခြား legal fees တွေကို ကိုယ့် Bank Account မှာ Ready ပြင်ထား…
(၄) Bank Loan offer letter ရဖို့ ပြင်ဆင်မယ်။
(၅) SPA (Sale & Purchase Agreement) လုပ်မယ်၊ တချို့က 2% earnest deposit နှင့် ၂ပါတ်နေရင် 8% ခွဲပြီး ပေးတာရှိသလို ရောင်းသူဝယ်သူ သဘောညီရင် 10% တစ်ခါတည်းပေးမယ်၊ ၃ လအတွင်း ကျန်ငွေပေးဖို့လိုပါမယ်။
Sale & Purchase ဆိုင်းထိုးတဲ့နေ့မှာဘဲ ကိုယ့် lawyer ကို သူ့ fees နှင့် တခြား ကုန်ကျစရိတ်များ တခါတည်း ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။
(၆) Consent letter ကို land office (State Authority) မှ ရအောင်lawyer ကလုပ်ပေးမယ်။ ခန့်မှန်းခြေ ၁ လမှ ၂ လကြာနိုင်တယ်။
(၇) Lawyer မှ Stamp Duty ပေးဖို့ စီစဉ်မယ်။
စလယ်ဆုံး စုစုပေါင်း ၃ (သို့မဟုတ်) ၄လ ခန့်ကြာနိုင် ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါလျင် ကိုသန့်ဇင် ကို ယခု PAGE တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/thantzin.htwe.35?fref=ts
Tags: Banking Services, Business, Compound interest, Down payment, Financial Services, Life insurance, Payment, Real estate
This entry was posted on August 4, 2013 at 1:49 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.